Apple waxay soo rartay iPads ka badan Samsung iyo Amazon oo wada socda | Wararka IPhone
Apple waxay soo dirtay iPads ka badan Samsung iyo Amazon oo la isku daray
IPadku waa kiniinka ugu fiican ee aan hadda suuqa ka heli karno, kiniin laga heli karo tiro aad u tiro badan oo loogu talagalay dhammaan jeebabka iyo baahiyaha ee adeegsadayaasha, helitaan aynaan ka heli karin soo -saare kale.
Sida laga soo xigtay shirkadda IDC, inta lagu jiro saddexda bilood ee ugu dambeeya, Apple waxay soo dirtay 12.9 milyan oo iPad (Moodooyinka lama jebiyo). Haddii aan isbarbar dhig ku sameyno tirooyinka kiniinnada ay Samsung iyo Amazon u direen suuqa, waxaan aragnaa sida wadarta labaduba aysan uga badnayn tirada unugyada ay dirtay Apple, oo taagan 12.3 milyan oo unug.
In kasta oo xaqiiqda ah in Apple uu ahaa soo -saaraha soo dhoofiyay kiniinnada ugu badan rubucii ugu dambeeyay, ma ahayn tii ugu koray. In kasta oo Samsung iyo Amazon ay la kulmeen koror tirada shixnadaha ee 13.3% iyo 20.3% siday u kala horreeyaan, kororka Apple marka loo eego sannadkii hore wuxuu ahaa 3,5%.
Soo saaraha ugu dhaqsaha badan Lenovo waxay ahayd tirada kiniinnada la diray. Huawei waxay ku xireysaa kala soocida 53,7% hoos u dhaca tirada shixnadaha marka la barbar dhigo sanadkii hore.
Marka loo eego xogta IDC, hadda Apple ayaa suuqa ku leh saamiga 31,9%, waxaa ku xiga Samsung oo leh 19,6%. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira Lenovo oo leh saamiga 11,6%, waxaa ku xiga Amazon oo leh 10,7% saamiga suuqa iyo Huawei oo leh 5.1%. Saamiga 21% ee soo haray waxaa la wadaaga soo -saareyaasha yaryar.
Kiniinnadu waxay ka mid ahaayeen aaladaha elektiroonigga ah ee koritaan dheeraad ah oo la soo maray 2020 oo dhan sababtuna tahay masiibada, oo ay weheliso Chromebooks si ay ugu habboonaan karaan daraasadaha. Waxaa la filayaa in tirooyinkan sare ay sii ahaan doonaan bilaha soo socda ilaa coronavirus uu noo oggolaado inaan ku noqonno noloshii hore (haddii ay suurtogal tahay).
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Apple waxay soo dirtay iPads ka badan Samsung iyo Amazon oo la isku daray
"Tinder for anti-vaccines" ayaa laga saaray App Store